१०९९ मा काम गर्नेले आयका आधारमा होइन सिधा साताको ६०० डलर मात्र पाउँछन् : सिपिए विराज रिजालको अन्तर्वार्ता - Vishwanews.com
अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण चर्किएसँगै बेरोजगारीदर ह्वात्तै बढेको छ । बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकी संसदले अघिल्लो साता दुई हजार अर्ब डलरको राहत प्याकेज पारित गर्यो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रमाणिकरण गरेसँगै उक्त प्याकेज कानून बनि सकेको छ । जस अन्तर्गत हरेक अमेरिकी करदाताले एक हजार दुई सय डलरको चेक पाउँदैछन् भने बेरोजगार हुनेले चार महिनाका लागि साताकाे छ सय डलर बेरोजगार बीमा बापत पाउनेछन् । उक्त बीमा रकम अप्रिल चार तारिख पछिको साताबाट वितरण सुरु हुँदैछ । उक्त रकम लिन पुर्याउनु पर्ने प्रकृयाबारे न्यूयोर्कमा ट्याक्स राजा एसोसिएट्स एलएलसी सञ्चालन गरि रहेका सिपिए विराज रिजालसँग विश्व न्यूजले गरेको कुराकानी ।
जसले पहिले देखिनै वेरोजगार बीमा (भत्ता) लिइ रहेका थिए, उनीहरुले नयाँ सुविधा कसरी पाउन सक्छन्?
हरेक राज्यले डब्लुटु फर्ममा काम गर्ने कामदारको लागि बेरोजगार बीमाको व्यवस्था गरेको छ । कुनै रोजगार व्यक्तिको प्रत्येक ‘पे चेक’ बापत सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले बेरोजगार बीमा बापतको प्रिमियम बुझाएको हुन्छ । त्यही प्रिमियमबापत कुनै ब्यक्तिले रोजगारी गुमाए २६ सातासम्म साप्ताहिक कमाइको ४० प्रतिशत रकम बेरोजगार बीमाको रुपमा पाउँछ । यस्तो बीमा लिने व्यक्तिले हरेक साता आफु बेरोजगार रहेको जानकारी आफ्नो राज्यको श्रम विभागलाई उपलब्ध गराइ रहनु पर्छ । नयाँ काम खोज्नका लागि यो २६ साताको अवधि दिइएको हो । त्यस अघिनै काम पाए बीमा बापतको रकम आउन छोड्छ । अहिले कोरोना भाइरस प्रभावितका लागि साताको थप छ सय डलर दिने गरि बेरोजगार बीमा कार्यक्रम बिस्तार गरिएको छ । संसदले प्रतिघण्टा १५ का दरले कुनै व्यक्तिले फूल टाइम (४० घण्टा) काम गर्दा सातामा छ सय डलरसम्म कमाउँछ भन्ने आँकलनका आधारमा उक्त रकम तय गरेको हो । जसले यो प्याकेज आउनु अगावै देखि आफ्नो राज्यबाट बेरोजगारी बीमा लिइ रहेका थिए उनीहरुले थप रकम लिन कुनै अतिरिक्त प्रकृया पुरा गरि रहनु पर्दैन । जसले भाइरस संक्रमणकै कारण रोजगारी गुमाए उनीहरुले भने आफ्नो साप्ताहिक डब्लुटु आर्जनको जानकारी सहित राज्यको श्रम बिमागमा बेरोजगारी फारम भरेपछि राज्यले दिन न्यूनतम बेरोजगारी बीमा र कोरोना भाइरस स्टिमुलेसन प्याकेज अन्तर्गतको छ सय डलर साप्ताहिक रुपमा पाउनेछन् । बेरोजगारी बीमा उपलब्ध गराउनु अघि श्रम बिभागले रोजगारदातालाई सम्बन्धित कामदारले जागिर गुमाए नगुमाएको पुष्टिका लागि पत्राचार गर्छ । रोजगारदाताले पुष्टि गरिदिएपछि बीमा रकम उपलब्ध गराउन सुरु हुन्छ ।
कन्ट्र्याक्ट (१०९९) मा काम गर्नेहरुले पनि आयकै आधारमा रोजगारी बीमा बापतको रकम पाउने हुन् ?
कन्ट्र्याक्ट (१०९९) मा काम गरेबापत बेरोजगारी बीमा कार्यक्रममा कुनै योगदान दिइएको हुँदैन । त्यसैले कन्ट्र्याक्टमा काम गर्नेलाई यसअघि बेरोजगारी बीमा उपलब्ध हुँदैन थियो । अहिले बिषेश परिस्थितको कारण कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने वा ‘सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट’ मा रहेकाहरुले पनि बेरोजगार बीमा पाउने व्यवस्था कोरोना भाइरस स्टिमुलेसन प्याकेजले गरेको छ । जस्तो न्यूयोर्कको सन्दर्भमा कन्ट्र्याक्टमा काम गर्नेहरुले राज्यको श्रम बिभागमा बेरोजगार भएको फर्म भरेपछि वेवसाइटमा एउटा फोन नम्बर उपलब्ध हुन्छ । त्यसमा फोन गरेर पुष्टि गरेपछि आफु उक्त सुविधाका लागि योग्य भइन्छ । प्रत्येक राज्यले आफ्नै शैलीले यसको व्यवस्था मिलाएका हुन्छन् । सबैको न्यूयोर्क जस्तै नहुन सक्छ । कन्ट्र्याक्टमा काम गर्नेले आफ्नो आयका आधारमा होइन सिधा साताको छ सय डलर मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
कन्ट्र्याक्ट र डब्लुटु दुई तिर काम गर्नेको आय चाहिँ कसरी गणना हुन्छ ?
यसमा पनि डब्लुटुको आय गणना गरि चलि आएको बेरोजगारी बीमाको रकम निकालिन्छ र त्यसमा राहत प्याकेज बापतको छ सय डलर थप भएर आउँछ । कन्ट्र्याक्टमा काम गरेर आर्जन गरिएको आय बीमा रकम भुक्तानीमा गणना हुँदैन ।
बेरोजगारी बीमा सरकारले दिने ‘फुड स्टाम्प’ जस्ता सार्वजनिक राहत (पब्लिक चार्ज)मा पर्छ कि पर्दैन?
परम्परागत रुपमा रोजगारी गुमाउनेलाई २६ सातासम्म दिइँदै आएको बेरोजगारी बीमा योगदानमा आधारित भएका कारण पब्लिक चार्जमा पर्दैन थियो । तर, अहिले सरकारले स्टिमुलेसन प्याकेज अन्तर्गत सबै क्षेत्रका बेरोजगारलाई दिने भनेको साप्ताहिक छ सय डलरबारे भने केही प्रष्ट भनिएको छैन । तर, यो आयलाई बार्षिक आम्दानीमा समावेश गरि कर विवरणमा देखाउनु पर्ने र कर समेत लाग्ने भएको कारण पब्लिक चार्जमा समेटिन्न भन्ने बुझाइ रहेको छ ।
कोरोना भाइरस प्रभावितका लागि ल्याइएको बेरोजगारी बीमा कहिले देखि उपलब्ध हुने हो?
यो रकम अप्रिल ४ पछिको साताबाट उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अर्थात आगामी साताबाट यो रकम बेरोजगारको खातामा जानुपर्ने हुन्छ । तर, बेरोजगारी फाराम भर्नेको अत्यधिक चापका कारण कतिपय राज्यले कार्यान्वयनमा समय लाग्ने समेत बताएका छन् ।
न्यूयोर्कमा कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने धेरैले श्रम बिभागमा बेरोजगारी फारामनै भर्न सकेका छैनन्, उनीहरुले राहत पाउने ढिला हुने हो?
न्यूयोर्कमा कन्ट्र्याक्टमा काम गर्नेहरुले बेरोजगारी फारम भरेपछि राज्यको श्रम विभागले दिएको टेलिफोनमा कुरा गर्न नसकेको गुनासो ब्याप्त छ । अत्यधिक चापका कारण यस्तो भएको हो । राज्यले आफ्नो नामका आधारमा फाराम भर्न एवं टेलीफोन गर्न बार तोकि दिएको छ । उक्त दिन राज्यको श्रम विभागको साइटमा गएर फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । डब्लुटु एवं १०९९ सबैमा काम गर्नेले भर्ने फाराम एउटै हो । कामको प्रकृति अनुसार फारामको विवरण मात्र फरक पर्छ । त्यसपछि आफुलाई तोकेकै दिनमा फोनमा प्रयास गर्नुपर्छ । फोन लागेन भने पनि आफुले प्रयास गरेको प्रमाण राख्न उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भएमा आफुलाई बीमा रकम आउन ढिला भयो भने समयमै प्रयास गरेको जानकारी दिएर दावी गर्न सकिन्छ ।
(तश्वीर: दिपिका श्रेष्ठ/पडकाष्ट एट द इन्ड अफ द डे डट कम)